Chii chiri chimiro cheiyo anion exchange resin
Anion uye cation exchange resin ine chimiro chakatsiga. Iyo inogadzirwa nemaune kuita network, yakaenzana-mativi mamiriro. Kune ma polymer anoenderana mukati maro, ayo anogona kunge ari acids kana matsime. Chete nekuita inoenderana polymerization ndipo pano zvine mushe mushe ...
Cation exchange resin: shandisa uye kugadzirisa
Mukati mekushandisa resin, kusvibiswa kwechinhu chakamiswa, zvinhu zvakasikwa nemafuta zvinofanirwa kudzivirirwa, uye kusanganiswa kwakanyanya kweimwe mvura yemarara pane resini kunofanira kudzivirirwa. Naizvozvo, inorema simbi ions inofanira kubviswa pamberi peacid oxidation yemvura yakasviba inopinda anion resin kudzivirira iyo cataly ...